Ipulazi elidala elingu-300yr eliguqulwe laba yikhaya elincane lokwamukela - I-Airbnb
Ipulazi elidala elingu-300yr eliguqulwe laba yikhaya elincane lokwamukela
Indlu encane eshintshashintsha nezimo nevulekile enendawo enkulu yokuhlala futhi idonse umbhede wesofa yenza lokhu kube indawo ekahle kakhulu yokuhlala yabantu abashadile noma imindeni emincane enezingane ezincane ezifuna ukujabulela isiqhingi esihle saseGozo ngentengo encintisana kakhulu.
Leli khaya elincane eliyingqayizivele lihlanganisa itshe lakudala nemininingwane yesimanje ukwakha isitayela esihle kakhulu. I-Studio 47 inekhishi elintofontofo elinezindawo zetiye nekhofi, isiqandisi kanye nohhavini ogcwele wokupheka isidlo sakho sasekuseni, isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa uma unesifiso.
Sikuqinisekisa ukuthi uzolala ngokunethezeka, kungaba embhedeni omuhle kabili noma ukhiphe umbhede owusofa olala abantu ababili, ogoqwe ngamashidi kakotini asezingeni eliphezulu waseGibhithe ukuze uhlale kahle.
Kungakhathaliseki ukuthi ujabulela isidlo sasekuseni etafuleni lokudlela noma uphumule kusofa ubuka i-Netflix, singakuqinisekisa ukuthi i-Studio 47 izoba ikhaya lakho kude nasekhaya.
Njengoba isendaweni ephakathi nendawo, ungakwazi ukuya kalula kunoma yiziphi izindawo ezifiselekayo esiqhingini ngemizuzu engu-15 nje yokushayela. Nakuba ungaphuthumi ukuphuma edolobhaneni ngokushesha njengoba i-Xewkija inokuningi ongakunikeza. Leli dolobhana linabantu abangaphezu kuka-3,000 futhi lidala kunawo wonke esiqhingini, lihlala lingathintwa. Thatha uhambo ukuze ujabulele izindlu ezinhle zasepulazini, ubungcweti obumangalisayo nobuhle obungena kuyo yonke idolobha.
Uqhele ngemizuzu engu-5 nje yiSonto elidumile lase-Xewkija. Ikala ngamamitha angu-75 ukuphakama kanye namamitha angu-27 ububanzi; yindawo yesithathu enkulu kunazo zonke engasekelwa emhlabeni, ngemva nje kwe-St Peter 's e-Rome nase-St. Paul' s Cathedral. Ngaphakathi kwesonto ungakwazi ukujabulela ubuciko obuhle, ubungcweti obukhulu bokwakheka futhi uthathe ukuphakamisa uye phezulu ukuze uthole umbono omangalisayo we-360 degrees weGozo ukuze uthole leso sithombe esiphelele.
Ukhathazeke ngombono omuhle wesonto? Thamela isikhathi eside ku-piazza eguquliwe enhle, lapho ungajabulela khona noma yini kusuka ekhofi ekuseni kuya ezindaweni zokudlela ezinhle kusihlwa.
Umthandi wasebhishi? Khona-ke kungani ungathathi ukubhukuda e-Mgarr-ix-xini emangalisayo yase-Xewkija eyenziwa yaduma yifilimu ka-Brad Pit no-Angelina Jolie ethi "By The Sea". Nakuba ukuthola ukuchayeka emhlabeni wonke ngale filimu, i-Mgarr Ixini isalokhu iyibhishi elithulile, ikakhulukazi ngaphandle kwenkathi yonyaka ematasa. Phumula futhi uthamele ilanga elalela amagagasi amnene olwandle futhi ujabulele ukubuka izindawo ezinhle ngokukhetha ukudla okukhiqizwe endaweni kanye nesiphuzo esitholakala endaweni yokudlela eseceleni kolwandle. Uma uthanda okuthile okusebenzayo, bhukuda emanzini acwebile noma uhambe esigodini ukuze ubone ukubukeka okuhlaba umxhwele kwe-Malta ne-Comino. Kungakhathaliseki ukuthi usemusha noma ungumuntu osemnkantsh 'ubomvu, kungani ungaxhumani nenye yezinkampani zokutshuza zasendaweni ukuze uthole uhambo oluyingqayizivele ngaphansi kwamanzi?
Sihlale sithanda ukuzwa izindaba ezivela ekuzijabuliseni kwakho okuzungeze idolobhana ngakho sazise ukuthi yini oyithokozele kakhulu encwadini yethu yezivakashi!
4.74 · 105 okushiwo abanye
Le ndlu itholakala kalula emgwaqeni oyinhloko e-Xewkija futhi inezitolo ezinkulu ezimbili nje iminyango embalwa kanye neziteshi eziningana zebhasi eziseduze. Ungapaka ngaphandle mahhala noma uthathe uhambo lwemizuzu engu-15 ukuya "enkabeni yedolobha" lase-Victoria. Uma uzizwa ungumqemane, hlola i-pizzeria nomndeni ojwayelekile ogijimayo ophethe ibhikawozi emgwaqweni futhi!
Lapho ufika, uzothola imininingwane ongayidinga, futhi imenenja yethu izohlala iseduze kakhulu nganoma yiluphi usizo noma izicelo ozidingayo phakathi nokuhlala kwakho. Uyajabula ukukuphendula amahora angu-24 ngosuku ukuqinisekisa ukuthula okukhulu kwengqondo nokwaneliseka kwamakhasimende okungu-100%.
Lapho ufika, uzothola imininingwane ongayidinga, futhi imenenja yethu izohlala iseduze kakhulu nganoma yiluphi usizo noma izicelo ozidingayo phakathi nokuhlala kwakho. Uyajabula uk…